I-Semalt: Indlela Yokukhipha Ugaxekile Wokudlulisela Ugaxekile Ku-Google Analytics
Labo, abawazi ukuthi ukuthunyelwa kogaxekile kukuphi, qonda ukuthi ukukhathazeka kanjani uma kungena ku-Google Analytics yakho. Umkhuba wokudluliselwa kogaxekile we-spam ukungena kwe-GA kuye kwavela eminyakeni yamuva. Uma ungumnikazi wesayithi, udinga ukwazi ukuthi ungayibhekana kanjani nayo ukuze ugweme imiphumela emibi engaba nayo ebhizinisini lakho.
I-Blackhatworth - companies design website.com ingenye yezigameko zokudluliselwa ezinabaphathi abaningi besayithi kanye nabaphathi abashaya amakhanda abo. Kuyinto isayithi elikuthumayo ithrafikhi noma "hits hits" futhi izizathu zokwenza kanjalo zihlukahlukene. Ezinye izigaxe zokudlulisela zihlose ukuheha izivakashi kumasayithi abo. Bayazi ukuthi kunezingosi ezishicilela izinhlu zabaxhumanisi babo abaphezulu. Izingosi zokugaxekile zithemba ukuthola izivakashi ngenxa yokuthi zivele nje ohlwini olufanayo. Lawa masayithi futhi abuyele ebhange ngokufuna ukwazi abaphathi be-site. Bathemba ukuthi uma begaxekile, uzofuna ukwazi ukuthi kungani baxhuma kuwe. Uvakashela isayithi labo ukuhlola, futhi yilokho okudingayo - ithrafikhi.
UJack Miller, ochwepheshe bephezulu kusuka ku Semalt , wembula lapha izindlela zokuqeda lolu hlobo logaxekile lokudlulisa.
Ingabe i-Blackhatworth.com yokudlulisa ugaxekile iyingozi?
Nakuba ukudluliselwa kogaxekile kungase kungabi yingozi ngoba kungabanjwanga nezenzo ezinonya njengokusabalalisa i-malware, kuyinkinga enkulu ngoba ithinta idatha yakho ye-GA.
Inkinga ebangelwa ukugaxekile kogaxekile ukuthi ihlaziya idatha yakho ye-analytics web. Idatha yakho ihlaselwe futhi ihluleka ukunikeza amamethrikhi anembile yethrafikhi eqondiswe kusayithi lakho. Izinqumo ezenziwe ngokusebenzisa le data engalungile zingaba yingozi kakhulu kunokuba ziwusizo ebhizinisini. Ngeshwa, abantu abangaqapheli ugaxekile wokudlulisa benza kanjalo futhi kamuva bayazibuza ukuthi kungani ama-SEO amasu abo engasebenzi njengoba kulindeleke.
Ukuqeda i-Blackhatworth.com Ukudluliselwa kogaxekile ku-Google Analytics
Ukusetha izihlungi zokugaxekile kogaxekile ku-GA kungenye yezindlela eziphumelelayo zokususa ithrafikhi yamanga kusuka kumasayithi okugaxekile. Izihlungi zinakekelwa ngamasayithi athumela i-traffic fake ku-GA ngokuqondile kanye nalabo abasebenzisa i-bots ukuvakashela isayithi lakho.
Ngena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-GA naku-Ukubuka phansi kwe-Buka, chofoza Yakha umbono omusha bese usinikeza igama.
Yakha isihlungi esisha ngokuchofoza Izihlungi> Isihlungi Esisha. Yisho isihlungi esisha 'blackhatworth.com kuhle'.
Emva kokukhetha uhlobo lwesihlungi senkambiso, chofoza u-Hlela futhi ku-Hlaziya Yehla Yesihlungi khetha Ukudluliselwa.
Emkhakheni we-Filter Pattern, faka i-blackhatworth \_ .com bese usindisa izilungiselelo zakho.
Ungenza lokhu kunoma yikuphi ukuthunyelwa kogaxekile okungavela kumbiko wakho we-GA. Qinisekisa ukuthi ngaphambi kokuhlunga noma iyiphi i-domain oyihlolayo kuqala ukuqinisekisa ukuthi empeleni ungumxhasi wogaxekile. Awufuni ukuhlunga izingosi zangempela bese ulahlekelwa ithrekhi yangempela ngephutha.